नेपाल आज | देश जोगाउन फेरि खुकुरी झिक्नु पर्ने भयो
देश जोगाउन फेरि खुकुरी झिक्नु पर्ने भयो
बुधबार, १९ माघ २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
वर्तमान सरकारमा बस्नेहरु, जो अहिले सरकार चलाएको छु भनिरहेका छन् ती सबै देशद्रोही हुन्, राष्ट्रघाती हुन्, विदेशी दलाल हुन् । यी नेपाल र नेपालीका लागि सरकारमा गएकै होइनन् । स साना तत्वहरुले यो देशको अस्मिता लुट्ने, विखण्डन गर्छौैं भनेर खुलेआम भाषण गर्दै हिँड्नेहरुलाई कुनै कारबाही नगर्ने, हाँसेर बस्नेहरुलाई देशद्रोही नभने के भन्ने ?
यी नेताहरु नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षाबाट चलेको भए, नेपाललाई माया गरिदिएको भए आज यस्तो अवस्था आउने थिएन । यिनीहरु स्वार्थमा यति लिप्त छन कि उनीहरुले कुर्सी र पैसा मात्रै देख्छन् ।
भारतको राष्ट्रपति आउँदा बिदा दिने वा चीनको राष्ट्रपति आउँदा बिदा दिने जस्ता हर्कतहरुले गर्दा यो देशको अस्मितामा गम्भीर घात भएको छ । विदेशीको इशारामा चल्ने यी गद्दार नेताहरुका कारण आज मुलुक तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
जसले देश टुक्रा पार्छु भन्छ, त्यस्ता गद्दारहरुलाई कतिपय मुलुकमा फाँसीको पनि सजाय हुने गर्छ । तर नेपालमा प्रधानमन्त्री नै भनिरहेका छन् कि बिखण्डनबादीलाई जनताले कारबाही गर्छन् । जनताले कानुन हातमा लिने हो भने सरकारको काम चाहिँ के त ?
सरकारले जे गरोस नगरोस् यस्तै अवस्था हामी चाहीँ सहेर बस्न सक्दैनौं । देश टुक्रा पार्छौं भन्नेहरुको गर्दन टुक्रा हुनु त कुनै नौलो कुरै होइन । विषय त तरबार र खुकुरीले जोगाएको देश हो यो ।
पहिले बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहसहित हाम्रा बीर पुर्खाले जोगाए । अब हामी उनका सन्ततीहरुले फेरि जोगाउनु पर्ने बेला आएको छ । अब हामी आफै हातमा खुकुरी र तरबार लिएर बिखण्डनवादीहरुको गर्दन खण्डन गर्दै हिँड्नु पर्ने बेला आएको छ ।
(शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेतले भिडियो अन्तर्वार्ताका क्रममा व्यक्त गर्नु भएको धारणाको सार ।)
anil basnet politics sivasena nepal